Cunto: Ma waxaan qaban karnaa Google Analytics Referrer Spam?
Ugu dambeyntii, dad badan ayaa la ogaaday in ay ka doodayaan hababka looga hortago spam gudbinta iyo in xiriirka kanu yahay mid muhiim ah. Halkan, Andrew Dyhan, oo ah takhasus sare oo ka socda Semt , ayaa la wadaagay hababka looga hortago spam gudbinta Google Analytics. Laakiin ugu horeyntii, waxaynu og nahay wax yar oo ku saabsan.
Horudhac gaaban (Google Analytics)
Spam gudbinta Google Analytics waa nooc ka mid ah jabsiinta loo isticmaalo in lagu soo diro xog been abuur ah oo koontadaada falanqaynta ah - cloud computing san jose. Qormo gaar ah ayaa loo adeegsadaa marka la eego tan loo yaqaano "Protocol Protocol", kaas oo soo ururiya macluumaad ku saabsan boggaaga internetka wuxuuna waxyeeleynayaa warbixinta Google Analytics adoo isku dayaya hal dhinac ama kan kale. Waxay u direysaa tarjada been abuurka ah ee boggaaga, iyagoo muujinaya hits-ka Google Analytics. Ujeedadaas awgood, khaniisiinta waxay isticmaalaan aqoonsi gaar ah oo khaas ah si ay u qabtaan milkiilayaasha bogagga iyo khubarada Google.
Haddii aad qaadatid gaadiid been abuur ah ama hits dhab ah, waxaa had iyo jeer lagu muujiyay warbixinta boggaga gudbinta. Haddii aad rabto inaad hubiso, waa inaad tagtaa qaybta Qaadashada ee koontadaada Google Analytics oo aad aragto ikhtiyaarka gudbinta halkaas oo liiska spam laga heli karo. Spammarafiyiinta waxay abuuraan aqoonsiyada hantida UA oo waxay u diraan taraafikada xun xun ee shabakadaha siyaabo kala duwan.
Sidee loola dagaalamayaa google Analytics adeegbixiyaha?
Kuwa bilowga ah, taladayada waa in ay tagaan Nidaamkooda guddiga maamulka. Halkan waxaa lagaa rabaa inaad hubiso xulashada Bot Filtering oo riix 'Hits All Hits'..Tani waxay ugu dambeyntii ka saari doontaa hitska ay soo saareen caarada iyo dhererka. Ilaa hadda, waa ficilka ugu fiican ee lagula dagaallami karo google Analytics xawaaraha gudbinta Google. Arrinta waxaa lagu xallin karaa siyaabo kale oo badan, laakiin tani waa ficilka ugu fiican ilaa hadda.
Maxaa ku saabsan santuuqa?
Filters ayaa loo abuuray si looga saaro spam gudbinta gudbinta warbixinta Google Analytics. Haddii aad rabto inaad abuurto shaandhada, waa inaad tagtaa Filters doorasho oo aad abuurto tiro muhiim ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa shaandhada horay loo dhisay iyo dooro ikhtiyaarka gaarka ah si aad u hesho hawlgal. Waxaa suurtagal ah in lagu daro ama laga saaro shaandhad ku salaysan shuruudahaaga. Haddii aad ka shaqeyneyso jiheeyayaasha kala duwan, waa inaad sameysid tiro fara badan oo si aad uga ilaaliso boggaaga interneetka khayaanada, spam, iyo hackers.
Miyaan kareyn karnaa filtarka?
Nasiib wanaag, waxaa suurtagal ah in la baabi'iyo feylka. Xayeysiinta spamer soo celinta waxay siisaa dadka isticmaala fursado badan oo kala duwan. Waxaad si fudud ugu xiriiri kartaa xisaabta Google Analytics. Markaad ku xiran tahay, tallaabada xigta waa inaad ka ilaalisid boggaaga spameraha gudbinta iyo xayeysiisyada xayeysiinta ee koontada Google Analytics.
Maxay tahay furaha xog ururinta?
Fureyaasha xog ururinta ayaa loo isticmaalaa si loo ururiyo macluumaadka xisaabta Google Analytics sahlan. Xeeladahan, waa inaad Google u sheegtaa lambarka sirta ah ee hantidaada falanqaynta mar kasta oo ay dadku booqdaan website-kaaga. Iyadoo ku saleysan macluumaadka, koontadaada ayaa la cusbooneysiin doonaa, waxaadna yeelan kartaa fikrad ah in gaadiidku yahay mid sharci ah ama aan ahayn.
Halkan waxaan ku soo bandhignay habab dhowr ah oo aad isticmaali karto si aad u abuurto shaashadda koontada Google Analytics. Ka takhalusidda spam u gudbinta farsamooyinkaan waa suurtagal. Hase yeeshee, ma jiraan wax lagu hubiyo boqolkiiba boqol natiijooyinka.